चित्र बहादुर केसिकाे अकल्पनीय कर्तुत बाहिरिएपछि….::देश र जनताप्रति समर्पित
चित्र बहादुर केसिकाे अकल्पनीय कर्तुत बाहिरिएपछि….
राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी चर्काे बिवादमा तानपएका छन् । साेझा छवि बनाएका नेता केसी काे कर्तुत बाहिरिएकाेे छ । समकालीन राजनीतिमा मूल्य, निष्ठा र इमानको राजनीति गर्ने व्यक्तिका रूपमा उनलाई लिइन्छ ।
तर, बिहीबार प्रकाशित हुने ‘शुक्रबार साप्ताहिक’ले सोझा नेताको गम्भीर अपराध शीर्षक दिएर केसीको कर्तुतबारे रिपोर्ट बनाएको छ । रिपोर्टअनुसार, उनले आफ्ना दुई नातिका बाबु र आमा नै परिवर्तन गरिदिएका छन् ।
तीनपटक सांसद् भएका उनले आफू संविधानसभाको सभासद् भएका बेला मा कानून छलेर जेठा छोरा सचित्र केसीतर्फका दुई छोरा सचित र सचिन केसीलाई कान्छा छोरा विष्णु केसीको छोरा बनाइएको दाबी शुक्रबारको छ ।
आफू सभासद् भएका बेला गाउँविकास समितिलाई प्रभावमा पारेर उनी झूटो सिफारिस बनाउन आफैं खटिएका थिए । यो थाहा पाएर जनमोर्चाका कार्यकर्ताले त्यसो नगर्न सुझाएका थिए । तर, उनले त्यसको प्रवाह नगरी ०६७ माघ ५ गते प्रशासनलाई पत्तै नदिई बाबु–आमा परिवर्तन गराएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यद्यपि, उनले परिवारमा भने उनले सल्लाह गरेका थिए ।
केसीले यसो गर्नुको कारण पनि शुक्रबारले खुलाएको छ । शुक्रबारका अनुसार, गैरकानूनी रुपमा दुई बालकको बाबुआमा परिवर्तनको कारण जापानमोह हो । चित्रबहादुरका कान्छा छोरा विष्णु जापानमा छन् । चित्रबहादुरले दुई नाति जापान पठाउने मोहकै कारण उनीहरुका आमा–बाबु नै परिवर्तन गरिदिएको शुक्रबारको ठम्याइ छ ।
पौडेलले यसमा चित्रबहादुर आफैं लागेजस्तो नलागेको र कानूनी व्यवस्थाबारे थाहा नभए पनि ठूलो इस्यु भने नभएको बताएकी छन् । शुक्रबार साप्ताहिकबाट